Ko tende rako isapinda?
Hazvinei kuti tende riri isapinda kwete chete chokuita mvura zvakadini mbiru chinokosha, chinonyanya kukosha vari kugadzira uye hunoshamisa. Zvinoita nyore, asi mijenya matende pamusoro kumusika iri kukundikana kuita kudaro, kunyange izvozvo anotaurwa mvura chomupepanhau 5000mm. Tatenda indoor mvura bvunzo zvokushandisa, izvo zvinoita kuti mvura chiedza taramba chero nguva, izvozvo kuchatibatsira kuwana chero usabuda mukana kuitira kuti tive kubereka wakakwana isapinda tende.
How kuti tende isapinda?
Chokutanga, kana mutende isapinda wakabatana kwete chete mashoko asi kuvimba magadzirirwo hunoshamisa. Usati isa murayiro, mungadai nani kubvunza nokutengesa wako nezvazvo uye kuwana mhinduro yakajeka.
Chechipiri, unogona kuva tarp pamwe tende rako yakatarwa kuti tende rako isapinda. Ndapota yeuka kuva kuraira pamwe tende rako.
How kuziva tende mangani munhu?
Saka kuna ISO5912, pane 2 Mapato kuti mumatende. Category A chete zvachose uremu pamunhu kwete kupfuura 2.5kg, Category B chete zvachose uremu pamunhu kupfuura 2.5kgs. Nokuti Category B, mumwe munhu anofanira kuva hope nharaunda kwete asingasviki 200 X 60cm. Nokuti Category A, ari Kureba havafanire asingasviki 195cm, nohupamhi panguva papfudzi havafanire asingasviki 58cm, panguva musoro & tsoka nzvimbo havafanire asingasviki 35cm. Kana zviri zvikuomere kurangarira izvozvo, chete kufunga kuti mumwe munhu ave hope nharaunda kwete asingasviki 200 X 60cm.
Sei kutsanangura tende riri kodzera?
Chokutanga, inofanira kuenderana mutemo apo zvichaitwa kutengeswa, akadai moto nemishonga pana North America pamusika.
Chechipiri, kana kufefetedza Zvaringana. ISO5912 ane kunobva zvinodiwa nezvazvo. Asi tende anofanira akagadzirirwa maererano tembiricha kuti musika zvakasiyana.
Chechitatu, iva nechokwadi tende riri isapinda kunze kugadzira kwete kukumbira isapinda. Ndicho kudiwa asi mijenya matende vanotadza kuzadzikisa izvozvo.
Budai, Strong, kuchinja uye vafuke wakakombama.
Chechishanu, kuvimba chinangwa zvakasiyana, zvinofanira zvakasiyana kuvaka magadzirirwo uye sarudza zvinhu zvakasiyana. Kana uine zvinodiwa, sununguka kutaura nesu.
Ndizvo zvakakodzera kushandisa tsoka, sei kushandisa chavangayeukwa?
Footprint aigona kudzivirira kwenyu tende uriri kubva midziyo inopinza, akadai Beach ibwe, siteki. Havasi vose tende vanoda tsoka.
Kana akaisa tsoka pasi mutende, iva nechokwadi usina zvikamu izvozvo tende rako, nekuti kana kunonaia, mvura inogona kuwana pamusoro chavangayeukwa uye kumhanya pasi tende rako uye soka guva tende.
Unoziva vangani mhando yokusona zvakagadzirwa kuti vakarara bhegi? Chii musiyano?
Chii yokusonesa kuvakwa wehomwe yenyu yokurara? Ndizvo zvakakodzera zvakanaka zvenyu chinangwa? Ko nokutengesa wako akakuudza iro kuvaka inoshandiswa nokuda muhombodo kurara kwako uye kuchiitwa nechimwe kuvakwa? Kazhinji, pane 2 vakasiyana zvakagadzirwa nezuva pamusika, ari H mukamuri uye kaviri H yomukati.
The H Chamber ndiye nyore uye nevakawanda zvikuru pakuvaka, kusona kuti goko, kuputira uye lining pamwe zvakananga. Kuvaka uyu unowanzoshandiswa kuti zhizha-chitubu mienzaniso
Double H kamuri , inova dzakakurumbira zvikuru kushandiswa pasi tembiricha akarara bhegi. Pane 2 vakaparadzana akaturikidzana, kuruvanze rukoko kusona goko & imwe paiva kuputira pamwe uye yomukati rukoko kusona lining uye mumwe paiva kuputira pamwechete, ipapo kusona 2 akaturikidzana pamwechete. Ichi kaviri H kuvaka kugona kuva kuputira uye waivako kupfuura H mukamuri kuramba vakarara bhegi inodziya. Pashure mijenya pamusoro kumbogadzirwa kuti mudziye bvunzo ne "chafariz chokunyepera", tinoona kuti pane achiri "Pfungwa Cold", saka isu kushandisa nani kaviri H kuvakwa.
Ko bhegi rako akarara isapinda?
Kana mumwe ndinokuudzai kuti bhegi ravo akarara ari isapinda, unofanira kufunga kana / ari mutsetse uyu. Sleeping bhegi vanofanira NOT isapinda, izvozvo kuva mvura dzinga uye nemhepo. Kana bhegi rine akarara riri isapinda, uchakurati- vamwe chaizvo yakakwirira yakati jira haana nemhepo oga. Mutengi achava ziya uye kunzwa kusagadzikana chaizvo.
Tine zvichemo zvakawanda zipi matambudziko bhegi redu makarara, mune chero mhinduro?
Zipper waivako pamusoro vakarara bhegi chokuita zipi yepamusoro uye vakarara bhegi magadzirirwo. Tine zipi nezvakanaka chaizvo unhu asi chete arasikirwe 30-40% kubva YKK zipi. Kana mumwe ndinokuudzai kuti zipi yavo zvakanaka, ndapota regai kuedza zipi pacharo chete, mungadai kuidza zipi pamusoro vakarara bhegi nani.
It vanovimba zvakasiyana bhegi kurara kuvaka uye zvakasiyana zvinhu yaishandiswa. Ndapota, sununguka ngatirege kuziva kana uchida muchina bhegi wachika akarara.
Zvaunosarudza kupikiniki jira rokudzimisa muchina wachika?
Tine muchina wachika kupikiniki jira, asi kwete vose kupikiniki gumbeze iri mashing wachika. Tapota kutirovera runhare kuti mashoko.
Sei hunovimbisa chigadzirwa unhu hwako? Chii chipimo Uri wakatora?
Ko zvinhu zvenyu zvemakemikari vakasununguka uye zvakatipoteredza ushamwari?
Unogona kupa yakadereresa mutengo uri pamusika?
Ndinofunga zvatisingazivi sarudzo yako zvakanaka kana uri simbisa mutengo chete. Tinogona kupa yemakwikwi zvikuru mutengo kwakavakirwa chigadzirwa zvakagadzirwa zvakanaka uye chigadzirwa unhu akanaka.
Hongu, tine simba dzichiri chikwata. The zvigadzirwa aigona kubudiswa sezvawakachitarira chikumbiro.
Chii mubayiro wako uye mubhadharo chokushandisa?
Payment izwi: 30% dhipoziti pachine, 70% mwero pamusoro kopi B / L pamwe mazuva 10.
Payment chokushandisa: TT, L / C, pamwe & Paypal Western.
Kutumirwa mutengo kunobva nzira yaunosarudza kuwana zvinhu. Express ndiye inoita asiwo nzira dzakawanda zvinodhura. By gungwa ndiyo yakanakisisa mhinduro kuti guru vhoriyamu. Dzimwe nguva, nechitima. mitoro rate gedye inowanika chete kana tichiziva mashoko bhuku, uremu uye chikepe nzira. Tapota kutirovera runhare uwane mamwe mashoko.